Wafdi uu horkacaayo Sheekh Axmed Madoobe oo maanta si lama filaan ah dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo.
on August 01 2013 Waxaa maanta si lama filaan ah magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose dib ugu soo laabtay wafdi uu horkacaayo hogaamiyaha ururka Raaskambooni Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ka dib safaro maalmo badan qaatay oo ay mudooyinkii dambe uga maqnaayeen halkaas.
Wafdiga Sheekh Axmed Madoobe ayaa waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, waxaana halkaasi si aad ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka mid ah maamulka halkaasi iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya, iyagoona ka dib loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi.
Sheekh Axmed Madoobe ayaa mudooyinkii dambe waxa uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, waxaana uu sidoo kale safaro kale hore ugu tagay dalka Itoobiya halkaasi oo uu kula soo kulmay madaxda dalalkaasi.
Dib usoo laabashada uu maanta Sheekh Axmed Madoobe ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ma ahayn mid hore loo sii shaaciyay, waxaana dhawaantaan la filaayaa in maamulka uu isaga hogaaminaayo in loo dhameeystiro golaha wasiirada ee ka harsanaa.
Xafiiska Waraabinta Bulshoweyn.com ee Magaalada Muqdisho.Nagala Soo Xiriir:- info@bulshoweyn.com